မြန်မာနိုင်ငံရောက်တာ (၁)နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေအတွက် လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Sinon Loresca – Suehninsi
မြန်မာနိုင်ငံရောက်တာ (၁)နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေအတွက် လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Sinon Loresca
Sinon loresca ကိုတော့ ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ Sinon ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဖော်ရွေမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအခြေချလျက်ရှိပါတယ်။ Sinonကတော့ ရသမျှငွေကြေးတွေထဲကမှ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို မြင်ရင် တတ်နိုင်သလောက်လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းလေ့ရှိတဲ့ ပရဟိတစိတ်အပြည့်အဝရှိသူ
တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sinonထံ အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေဆီကနေ လက်ဆောင်လေးတွေရရှိထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Sinonက”ကျတော့်မြန်မာ‌မှာနေထိုင်တာ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဆန်! ဆီ! YOLO bakeryကပေါင်မု့န်တွေကို မန်းလေးမှာရှိတဲ့
ချို့တဲ့သူများထောက်ပံ့ရေး အသင်းဌာနကို သွားရောက်လှူ ဒါန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ မြန်မာက ကျတော့်ရဲ့ဒုတိယ အိမ် မြန်မာလူ‌မျိုးတွေက ကျတော့် တန်ဖိုးထားရသော လူမျိုးတွေ။ကျတော့်ကိုချစ်ပေးကြတာတွေ Supportiveလုပ်ပေးကြတာတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျ ချစ်တယ်မြန်မာ”လို့ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေချနေထိုင်တာ တစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အလှူဒါန်းလေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ
မျှဝေပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ဒုတိယအိမ်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့တာ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အလှူဒါန်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Sinon loresca ကိုတော့ ပရိသတျတှကေ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျထငျပါတယျ။ Sinon ကတော့ မွနျမာနိုငျငံသို့ ရောကျရှိလာပွီး မွနျမာလူမြိုးတှရေဲ့ ဖျောရှမှေုကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာပဲအခွခေလြကျြရှိပါတယျ။ Sinonကတော့ ရသမြှငှကွေေးတှထေဲကမှ လိုအပျနတေဲ့သူတှကေို မွငျရငျ တတျနိုငျသလောကျလေးနဲ့ ကိုယျတိုငျသှားရောကျလှူဒါနျးလရှေိ့တဲ့ ပရဟိတစိတျအပွညျ့အဝရှိသူ
တဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။ Sinonထံ အားပေးခဈြခငျကွတဲ့ပရိသတျတှဆေီကနေ လကျဆောငျလေးတှရေရှိထားတဲ့ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ Sinonက”ကတြေျာ့မွနျမာ‌မှာနထေိုငျတာ တဈနှဈပွညျ့တဲ့အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ ဆနျ! ဆီ! YOLO bakeryကပေါငျမု့နျတှကေို မနျးလေးမှာရှိတဲ့
ခြို့တဲ့သူမြားထောကျပံ့ရေး အသငျးဌာနကို သှားရောကျလှူ ဒါနျးခဲ့ပါတယျခငျဗြ။ မွနျမာက ကတြေျာ့ရဲ့ဒုတိယ အိမျ မွနျမာလူ‌မြိုးတှကေ ကတြေျာ့ တနျဖိုးထားရသော လူမြိုးတှေ။ကတြေျာ့ကိုခဈြပေးကွတာတှေ Supportiveလုပျပေးကွတာတှအေားလုံးအတှကျကြေးဇူးပါခငျဗြ ခဈြတယျမွနျမာ”လို့ဆိုပွီး မွနျမာနိုငျငံမှာ အခွခေနြထေိုငျတာ တဈနှဈပွညျ့သှားတဲ့အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ အလှူဒါနျးလေးပွုလုပျခဲ့ကွောငျးကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ
မြှဝပေေးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ဒုတိယအိမျဖွဈတဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ အခွခေနြထေိုငျခဲ့တာ တဈနှဈပွညျ့တဲ့အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ အလှူဒါနျးပွုလုပျခဲ့တဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှအေားလုံးသာယာပြျောရှငျတဲ့နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Source : Sinon Loresca
စားသုံးသူတွေကြားထဲ အချိန်တိုအတွင်း ဝက်နံရိုးမီးတောက်တွေ လက်မလည်အောင် ရောင်းရတာကြောင့် ဝမ်းသာနေတဲ့ ပွင့်နဒီမောင် နဲ့ ထူးခြား
အမွှာညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်နဲ့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပညာပေး ဗီဒီယိုလေးက ပရိသတ်တွေကြားမှာ မှတ်ချက်ကောင်းတွေရနေလို့ ပျော်နေတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
အမေဖြစ်သူ ခိုင်သင်းကြည်လို သရုပ်ဆောင်ပါရမီပါကြောင်း နှစ်ကိုယ်ခွဲပြီး သရုပ်ဆောင်ပြခဲ့တဲ့ စံထိပ်ထားဦး
ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် အလုပ်တွေအကုန် ရပ်နားထားရတဲ့ သူမရဲ့အဖြစ်ကို ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးံ